Haweenka Majeerteen ee Minnesota oo Taageerey Baaqii ka soo Baxay Boocame
Xaflad si qurux badan loo soo agaasimey oo ay soo qaban qaabiyeen Haweenka u dhashay Beesha Majeerteen ayaa ka dhacdey badhtamaha magaalada Minneapolis. Xafladaas oo ku saabsaneyd sidii loo taageeri lahaa baaqii ay soo saareen Beesha Siciid Harti (Dhulbahante) cuqaashooda iyo waxgaradkooda ku shirayey in dhaweyd magaalada Boocame. Haweenka Majeerteen ee degan gobolka Minnesota ayaa gunaanadkii xafladan soo saarey baaq ay ku taageerayaan oo ka kooban todobo qodob:
1. Haweenka Majeerteen oo si buuxda u taageerey go’aamadii ka soo baxay shirkii Boocame.
2. In aanu cambaaraynayno duulaanka qaawan ee gardarada ah ee lagu soo qaaday deegaanada Puntland, laguna qabsaday gobolka Sool, magaalo madaxdiisa Laascaanood. Isala markaasna aanu kula talinayno ciidamada Somaliland in ay si degdeg ah uga baxaan magaalada Laascaanood, si aan dhiig damebe oo soomaliyeed ugu daadan.
3. In la mideeyo, lana adkeeyo magaca qaranimada Soomaaliyeed marnabana la’ogolaan kala go’a wadanka Soomaaaliyeed.
4. In si buuxda looga qayb galo taakulaynta dadka ka barakacay guryahoodii magaalada Laascaanood, ee uusan caalamku weli u gurman.
5. In Haweenka Majeerteen ay wadaan dadaalkooda ay ku raadinayaan nabada iyo wadan jaceylka Soomaaliyeed.
Iyadoo isla goobtaas ay haweenku ku sameysteen seddex guddi oo ka shaqeeya midnimada umadda Soomaaliyeed:
A. Guddiga Maamulka
B. Guddiga dhaqaalaha
C. Guddiga xiriirka
Gunaanadkii, ayaa Haweenka Majeerteen halkaas ku soo bandhigeen buraanbur duco ah oo ku saabsan marxaladda hadda ka jirta goblka Sool.